अब शान्ति खोज्दै स्यान्क्चुरी सेन्टरमा. ….. – NamoBuddha Khabar
अब शान्ति खोज्दै स्यान्क्चुरी सेन्टरमा. …..
बिहिबार, आश्विन १८, २०७५ | १६:१०:१२ |
काठमाण्डौं–भगवान बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा “द महाशिद्ध स्यान्क्चुरी फर युनिभर्सल पिस सेन्टर”को निर्माण परियोजना थालिएको छ । लुम्बिनी बुद्ध जन्थस्थल क्षेत्रमै नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराईसकेपछि पहिलो चरणमा जग्गा सफाई काम भईरहेको छ । स्याल्पा तेन्जिङ ह्रेम्पोछेको परिकल्पनामा थालिएको सेन्टरमा बुद्ध मुर्ति,बगैंचा,प्रवचन हल,योग तथा ध्यान केन्द्र,पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय लगायत संरचना हुनेछ । जसलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिने योजना छ ।
ह्रेम्पोछेका अनुसार उक्त स्यान्क्चुरीको बाहिरी डिजाइन जुन छ,यसले फक्रँदै गरेको कमलको फूलको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । यसको प्रतिकले शुद्धताको अर्थ दिनेछ । मुख्य आकर्षण केन्द्र भनेको सालको वृक्षमुनि मायादेवीको कोखबाट जन्मँदै गरेका बुद्धको एउटा सुन्दर र विशाल मुर्ति हुनेछ । जसले प्राणीको मनलाई छुने ह्रेम्पोछेको दाबी छ । उहाँका अनुसार एक हजार पाँच सय जना अट्ने हल हुनेछ,जहाँ मनमा शान्ति मिल्ने अन्य विविध खालको कार्यक्रमहरु समेत गर्न सकिनेछन् ।
यस्तै स्यान्क्चुरीमा रहने द युनिभर्सल पिस पुस्तकालयमा बुद्ध ज्ञान, उहाँका प्रवचन सङ्कलन भएका पुस्तकहरु राखिनेछ । साथै सङ्ग्रहालयमा विभिन्न थाङ्का, बुद्धका अमूल्य मूर्तिहरु, धर्म ग्रन्थहरु रहने छन् । केन्द्रमा प्राचिन र आधुनिक तिब्बती लिपीमा लेखिएका बौद्धधर्मसम्बन्धी पुस्तकहरुको सङ्कलनका साथै तिनको चर्चा परिचर्चा पनि गरिनेछ ।
ह्रेम्पोछेले अमेरिका, थाइल्यान्ड, हङकङ, चीन, मलेसिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, संयुक्त राज्य बेलायत लगायत विभिन्न देशहरु पुगी परियोजनाका लागि सहयोग जुटाउनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिसक्नुभएको छ ।
“शान्ति सबैका लागि हो,सहयोग अरुका लागि हैन आफ्नै लागि हो ।” यस्तै कुरामा अपनत्व महसुस गराई शान्ति प्रतिको हिस्सेदार सबैलाई बनाउन बरु थोरै भएपनि प्रत्येक मानिसबाट एक÷एक रुपैयाँ सहयोग जुटाउने अवधारणा ल्याएको ह्रेम्पोछेले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो –“यो चिज हामी नेपालीहरु कत्तिलाई थाहानै रहेनछ,शान्ति यही भुमिमा,यहि मनमा मिल्दछ,संसारिक मोह,लोभ,पापलाई विर्सेर वास्तविक जीवन मार्ग पहिल्याउन ध्यान तपस्या,छलफल,अनुसन्धान गर्न जहाँ बुद्ध जन्मनुभयो,यहाँ नै “द महाशिद्ध स्यान्क्चुरी फर युनिभर्सल पिस सेन्टर”को आवश्यकता सान्दर्भिक छ ।”
बुद्ध जन्मेको भुमि नेपाल सगरमाथाको देश, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, मठ–मन्दिरको देश,कला संस्कृतिमा विविधता भएपनि एकता भएको देश भनि विश्वमाझ थप पहिचान समेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसकारण नेपाल स्वार्ग नै रहेको बताउनुभयो ।
बुद्धको जन्मथलोमा बसेर बुद्धको ज्ञान अध्ययन नगर्दा दुखको गहिराई घटाउनबाट नेपालीहरु चुकेको उहाँले औंल्याउनुभयो । बुद्ध ज्ञानलाई थोरै मात्र अनुसरण गरयो भने पनि मानव जीवनमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउने र शान्तिको महसुस मिल्ने उहाँको तर्क छ ।
सेन्टर अत्याधुनिक प्रविधि र सामाग्रीहरु प्रयोग गरी तीन बर्षभित्र बनाईसक्ने लक्ष्य छ । सेन्टरको आयु ५ सय वर्ष हुने र ८ रेक्टर स्केलसम्मको भुकम्प पनि थेग्न सक्ने खालको हुने दाबी गरिएको छ । निसर्त सहयोग मात्रै लिने भएकोले यसमा नेपाल सरकार तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोग के कत्ति रहने खुलाइएको छैन । यसको जिम्मा विश्व प्रसिद्ध एकाउन्टिङ कम्पनी डिलोएटले लिएको छ । सेन्टरको गत वैशाख १७ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले शिल्यान्यास गर्नुभएको थियो ।